Zvekuvanzika mutemo - GUTA FOMU DESIGN → Diki Yekuvakwa Kwemaguta ☆ Metalco ☆ Bellitalia
Zvemutemo zvekakavanzika uye makuki ("Zvepamberi Dandemutande")
Iyi YeSecurity Policy inoratidza kutarisira kodzero dzevashanyi kune webhusaiti uye kushandisa masevhisi anopihwa kuburikidza nawo. Iko zvakare kuzadzikiswa kwechisungo cheruzivo pasi peArt. 13 of the Regulation (EU) 2016/679 yeParamende yeEuropean uye yeDare 27 Zvita 2016 pane kuchengetedzwa kwevanhu maererano nekugadziriswa kwedata rega uye pane kusununguka kwekufambisa kwedata rakadai, uye kudzokorora Directive 95/46 / EC (general regulation pamusoro pekuchengetedza data rako pachako) (Chinyorwa cheMitemo UE L119 yaMay 4.05.2016, 1, p. XNUMX) (pano zvinonzi GDPR).
Iye muridzi webhusaiti anobhadhara zvakanyanya kuchengetedza zvakavanzika zvevashandisi vewebsite. Iyo data inowanikwa sechikamu che webhusaiti inonyanya kuchengetedzwa uye kuchengetedzwa kutarisana nekuwana nevanhu vasina mvumo. Iyo yekuvanzika mutemo inoitwa kuti iwanikwe kune vese vanofarira mapato. Webhusaiti yakavhurika.
Muridzi wepawebhu uyu anovimbisa kuti chinangwa chayo chikuru ndechokupa vanhu vanoshandisa webhusaiti kuchengetedzwa kwekuvanzika pane imwe nhanho inoenderana nezvinodiwa nemutemo unoshanda, kunyanya izvo zvinopihwa neGDPR uye Mutemo waKurume 18, 2002 pakupihwa kwemagetsi mabasa.
Iye muridzi webhusaiti anogona kuunganidza yako pachako uye imwe data. Iko kuunganidzwa kwe data idzi kunoitika, zvichienderana nemagariro avo - otomatiki kana semhedzisiro yezviitwa zvevashanyi kune webhusaiti.
Munhu wega wega anoshandisa webhusaiti chero nenzira ipi zvayo anogamuchira mitemo yese iri muChakavanzika Policy. Muridzi webhusaiti anochengetera kodzero yekuita shanduko kune iyi gwaro.
Ruzivo rwakawanda, makuki
Muridzi uye anoshanda webhusaiti iyi Water Point Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ine hofisi yayo yakanyoreswa muWarsaw, kero: ul. Fort Służew 1b / 10 Fort 8, 02-787 Warszawa, yakapinda muKunyoresa kweVamabhizimusi veNational Court Rejista yakachengetwa neDare reDare muWarsaw, Commerce Division yeNational Court Register, pasi peKRS nhamba: 0000604168, NIP nhamba: 5213723972, REGON nhamba: 363798130. Zvinoenderana na GDPR mirairo, muridzi webhusaiti zvakare ari wega Dhijitari Administrator yevashandisi vewebsite ("Administrator").
Sechikamu chezviitwa zvakaitwa, Administrator anoshandisa makuki nenzira yekuti anotarisa nekuongorora traffic mumapeji ewebhu, uye nekuita zvekudzokorora zviitiko, zvisinei, sechikamu chezviitwa izvi, Administrator haagadziri dhata remunhu mukati merinoreva GDPR.
Iyo webhusaiti inounganidza ruzivo nezve vashandisi vewebsite uye maitiro avo nenzira inotevera:
webhusaiti inongotora ruzivo rune ruzivo rwuri mumakuki.
kuburikidza nedata rakapinda nokuzvidira nevashandisi vewebsite mune mafomu anowanikwa pamapeji ewebhusaiti.
ne otomatiki kuunganidza yewebhu server matanda neanomubatirira anoshanda.
Ma cookie ma cookie (anonzi "makuki") ndeye data yeIT, kunyanya zvinyorwa zvemavara, ayo akachengetwa pane webhusaiti mushandisi wemhedzisiro yechigadzirwa uye anoitirwa kushandisa mashizha ewebhusaiti. Makuki anowanzove ane zita rewebsite iwo avanobva, iyo nguva yekuchengetedza pane yekupedzisira kifaa uye yakasarudzika nhamba.
Munguva yekushanyira webhusaiti, data yevashandisi vewebsite inogona kuunganidzwa otomatiki, ine chekuita nekushanyirwa kwemushandisi kune webhusaiti, kusanganisira, pakati pevamwe, IP kero, mhando yewebhu bhurawuza, zita rezita, nhamba yemapeji ekuona, mhando yekushandisa system, kushanya, skrini kugadzirisa, nhamba yemavara echiso, makero ewebsite kubva kune iyo webhusaiti yakawanikwa, nguva yekushandisa webhusaiti. Idzi data haisi data yako pachako, kana kubvumidza kuzivikanwa kwemunhu ari kushandisa webhusaiti.
Panogona kuve nekubatanidzwa kune mamwe mawebhusaiti mukati mewebhu webhusaiti. Iye muridzi webhusaiti haana mhosva yeyakavanzika maitiro emawebhusaiti aya. Panguva imwecheteyo, muridzi webhusaiti anokurudzira uyo anoshandisa webhusaiti kuverenga iyo mutemo yekuchengetedza zvakavanzika pane aya mawebhusayithi. Iyi yeCustomer Policy haishande kune mamwe mawebhusayithi.
Muridzi wewebsite webhusaiti iyo inoisa makuki pane webhusaiti mushandisi webhusaiti uye inowana iwo kwavari.
Cookies anoshandiswa ku:
Kugadzirisa zviri mukati mapeji ewebhusaiti kune izvo zvido zvemushandisi webhusaiti uye optimization yekushandiswa kwemawebsite; kunyanya, aya mafaera anotendera kuti azive mushandisi webhusaiti uye anyatsoratidza webhusaiti, yakarongedzwa kune zvake zvinodiwa,
kugadzira huwandu hunobatsira kunzwisisa mashandisiro anoita vashandisi vewebhu webhusaiti, izvo zvinobvumira kugadzirisa chimiro chavo uye zvemukati,
kuchengetedza webhusaiti webhusaiti chikamu (mushure mekutamira mukati), nekuda kwekuti iye haafanire kudzoreredza rake rejira uye password pane yega yepasi webhusaiti.
Iyo webhusaiti inoshandisa aya anotevera marudzi emakuki:
"Zvinodiwa" kuki, zvichiita kuti kushandiswa kwemasevhisi aripo webhusaiti, i.e.kisidhi makuki,
makuki anoshandiswa kuona kuchengetedzwa, i.e. anoshandiswa kuona kushungurudzwa,
"Performance" cookies, anoshandiswa kuwana ruzivo rwekushandiswa kwemapeji ewebhu nevashandisi vewebsite,
"Kushambadzira" cookies, zvichiita kuti vashandisi vewebsite vape kupa kushambadzira kwemukati zvakanangana nezvido zvavo,
"Anoshanda" makuki, achigonesa "kuyeuka" marongero akasarudzwa nemushandisi webhusaiti uye kugadzirisa iyo webhusaiti kune webhusaiti mushandisi, semuenzaniso maererano nemutauro wakasarudzwa.
Iyo webhusaiti inoshandisa maviri emhando dzekutanga makuki: musangano makuki uye anoshingirira makuki. Session makuki mafaira enguva pfupi akachengetedzwa pane yekupedzisira svumbunuro kusvikira vasiya webhusaiti, pinda kunze nemushandisi webhusaiti kana kudzima software (web browser). Makuki anogara aripo anochengeterwa webhusaiti ekupedzisira mudziyo wenguva yenguva yakataurwa mu cookie faira paramita kana kusvikira iwo abviswa nemushandisi webhusaiti.
Mune akawanda emakesi, software inoshandiswa kubhurawuza mawebhusaiti nekukanganisa inobvumira makuki kuti achengeterwe pane ekupedzisira webhusaiti mushandisi. Vashandisi vewebsite vane sarudzo yekushandura cookie marongero chero nguva. Aya marongero anogona kushandurwa mune sarudzo dzewebhu webhusaiti (software), pakati pezvimwe, nenzira iyo inodzivirira kubata kwega makuki kana kumanikidza mushandisi webhusaiti kuti aiswe chero kuki painoiswa pachishandiswa chavo. Ruzivo rwakadzama nezvezvingangoita uye nzira dzekubata makuki zvinowanikwa muwebhu browser browser.
Zvinodzora pakushandiswa kwemakuki zvinogona kukanganisa zvimwe zviitiko zvinowanikwa pamapepa ewebhusaiti.
Ma cookie akaiswa pane webhusaiti ekupedzisira mudziyo unogona kushandiswawo nevashambadziri uye vanobatidzana vanobatana nemuridzi webhusaiti.
Kugadziriswa kwedata rako pachako, ruzivo nezve mafomu
Yako data yevashandisi vewebsite inogona kuve yakagadziriswa neMubati:
kana mushandisi webhusaiti akabvumirana nazvo mune mafomu akatumirwa pawebhusaiti, kuitira kutora zviitiko izvo mafomu aya anoenderana (Chinyorwa 6 (1) (a) cheGDPR) kana
painogadziriswa inofanirwa kuitira kuti iite chibvumirano chakaitirwa kune webhusaiti webhusaiti (Chinyorwa 6 (XNUMX) (b) yeGDPR), kana webhusaiti ichigonesa kupedzisa chibvumirano pakati paMutongi uye mushandisi webhusaiti.
Sechikamu chewebhu webhusaiti, data rako pachako rinoongororwa chete nokuzvidira nevashandisi vewebsite. Iyo Administrator inodhonza yega data yevashandisi vewebhusaiti chete kusvika pakukosha kwezvikonzero zvakagadzirirwa mundima 1 lit. a uye b pamusoro uye kwenguva inodiwa kuzadzisa izvi zvinangwa, kana kusvikira mushandisi webhusaiti abvise kubvuma kwavo. Kukundikana kupa data nemushandisi webhusaiti kunogona, mune mamwe mamiriro, kukonzera mukutadza kuzadzisa zvinangwa izvo kupihwa kwe data kunodiwa.
Iyi inotevera yega data yemushandisi webhusaiti inogona kuunganidzwa sechikamu chemafomu akatumirwa pawebhusaiti kana kuitira kuti aite zvibvumirano zvinogona kupedzwa sechikamu chewebsite: zita, surname, kero, e-mail kero, nhamba dzefoni, kupinda, password.
Iyo data irimo mafomu, yakapihwa kune Administrator nemushandisi webhusaiti, inogona kuendeswa neiyo Administrator kune mapato echitatu ari kubatana neMubati maererano nekuzadzisa zvinangwa zvakarongwa mundima 1 lit. a uye b pamusoro.
Iyo data yakapihwa mafomu pane webhusaiti inoongororwa nekuda kwezvikonzero zvinobva mukushanda kweimwe fomu, uyezve, ivo vangashandiswe neMubati zvakare pakuchengetera zviitiko uye zviverengero. Kubvumirwa kwechinyorwa chedata kunoratidzwa nekutarisa yakakodzera hwindo mufomu.
Mushandisi webhusaiti, kana webhusaiti iyi iine mashandiro akadaro, nekutarisa hwindo rakakodzera mufomu yekunyoresa, anogona kuramba kana kubvuma kugashira ruzivo rwekutengesa nenzira yekutaurirana kwemagetsi, zvinoenderana neMutemo wa 18 Chikunguru 2002 pakupihwa kwemagetsi masevhisi. Nhoroondo yeMitemo ye2002, Nha. 144, chinhu 1024, sezvakagadziridzwa). Kana mushandisi webhusaiti akabvuma kugamuchira ruzivo rwekutengeserana nenzira yekutaurirana zvemagetsi, ane kodzero yekubvisa mvumo yakadaro chero nguva. Iko kushandiswa kwekodzero yekubvisa kubvumirwa kugamuchira ruzivo rwekutengesa kunoitwa nekutumira yakakodzera chikumbiro ne-e-mail kune kero yemuridzi webhusaiti, kusanganisira iyo zita uye surname yemushandisi webhusaiti.
Iyo data yakapihwa mune mafomu inogona kuendeswa kune masangano anopa tekinoroji mamwe masevhisi - kunyanya, izvi zvinoshanda pakuendeswa kweruzivo nezve muridzi wedhi rakanyoreswa domain kune masangano ayo ari Internet dhijitari vanoshanda (kunyanya veSainzi neZvemari Computer Computer jbr - NASK), ekubhadhara masevhisi kana mamwe masangano. iyo iyo Administrator inoshanda pamwe mune izvi.
Yega data yevashandisi vewebsite inochengeterwa mudhatabheti umo matanho ehunyanzvi uye easangano akaiswa kuti ave nechokwadi chekudzivirirwa kwe data rakarongedzwa maererano nezvinodiwa zvakarongwa mumirairo yakakodzera.
Kuti adzivise kunyoreswazve kunyoreswa kwevanhu avo kutora chikamu mune webhusaiti kwakabviswa nekuda kwekushandisa zvisiri pamutemo webhusaiti webhusaiti, Administrator anogona kuramba kudzima data pachako zvakakodzera kuvhara mukana wekunyoreswa patsva. Nheyo yepamutemo yekuramba ndeye Art. 19 ndima 2 point 3 maererano neArt. 21 sec. 1 yeChita chaJuly 18, 2002 pane kupihwa kwemagetsi masevhisi (semu Gumiguru 15, 2013, Nhoroondo yeMitemo yeRudzi rwe 2013, chinhu 1422). Kuramba kweMubati kudzima dhata yevashandisi vewebhu webhusaiti kunogona kuitikawo mune dzimwe nyaya dzakapihwa nemutemo.
Mune zviitiko zvakapihwa nemutemo, Administrator anogona kuburitsa mamwe e data yevashandisi vewebhu webhusaiti kune vechitatu mapato nezvechinangwa chine chekuchengetedza kuchengetedza kwekatatu kodzero.
Iye Administrator anochengetera kodzero yekutumira ese vashandisi vewebhu mae-mail nezviziso zvekuchinja kwakakosha kune webhusaiti uye nezve shanduko kune ino Chengetedzo Yakavanzika. Iye manejara anogona kutumira tsamba dzemagetsi zvemagetsi, kunyanya kushambadzira uye kumwe kushambadzira ruzivo, chero mushandisi webhusaiti akabvumirana nazvo. Vashambadziri uye humwe ruzivo rwekutengesa rwunogona zvakare kubatanidzwa neiri kuuya uye kubuda tsamba kubva kuaccount system.
Kodzero dzevashandisi veSevhisi nezve yavo yega data Zvichienderana neArt. 15 - 22 GDPR, webhusaiti yega yega mushandisi ane kodzero dzinotevera:
Iyo kodzero yekuwana data (Chinyorwa 15 cheGDPR)Iyo data yedhata ine mvumo yekuwana kubva kuna Administrator kusimbiswa kuti kana pachezvako data maererano naye kana iye ari kugadziriswa, uye kana zvirizvo, kuwana kwavari. Zvinoenderana naArt. Mutungamiri anozopa iyo data data nekopi yedhata remunhu riri kuongororwa.
Iyo kodzero yekugadzirisa data (Chinyorwa 16 cheGDPR)Iyo data yedhata ine mvumo yekukumbira iyo Administrator kuti igadzirise ipapo ipapo isiriyo yega data maererano naye.
Iyo kodzero yekudzima data ("kurudyi kukanganwirwe") (Chinyorwa 17 cheGDPR)Chinyorwa chedata chine mvumo yekukumbira iyo Administrator kuti ibvise pakarepo data rake, uye iye Administrator anosungirwa kudzima data pachako pasina kunonoka zvisina kufanira kana chimwe chezvinhu zvinotevera zvaitika.
data rako pachako harisisina basa nekuda kwezvinangwa zvavakaunganidzwa kana kuti neimwe nzira zvinogadziriswa;
iyo dhata chinyorwa chakabvisa mvumo iyo yakavakirwa
iyo data dhesi zvinhu zvinogadzirisa zvichienderana neArt. 21 sec. 1 inopesana nekugadzirisa uye hapana nzvimbo dzinokurumidza dzekugadzirisa
Kurudyi kurambidzwa kugadzirisa (Chinyorwa 18 cheGDPR)Chinyorwa che data chine mvumo yekukumbira Administrator kuti apinze kugadziriswa mune zvinotevera zviitiko:
Kana data risiri iro - nenguva yekuzvigadzirisa
Chinyorwa chedhata chakapokana nekugadziriswa kunoenderana neArt. 21 sec. 1 inopesana nekugadziriswa - kudzamara zvazotariswa kana zvikonzero zviri pamutemo pachikamu cheMutungamiriri zvinopfuura zvikonzero zvekuramba kwenyaya yedhata.
Kugadziriswa kwacho hakubvumirwi nomutemo uye chinyorwa che data chinopesana nekubvisa kwega data uye ndokumbira kudzora kwekushandiswa kwavo pachinzvimbo.
5. Kodzero yekutakurika kwedata (art. 20 GDPR)Chinyorwa che data chinemvumo yekugamuchira, mune yakarongedzwa, inowanzoshandiswa, mushini-inoverengwa fomati, data yega nezve iye, yaakapa kune Administrator, uye ane kodzero yekutumira iyi data yega kune mumwe maneja pasina zvipingamupinyi kubva kuMubati izvo data iri revanhu rakapihwa. Chinyorwa chedata chine kodzero yekukumbira kuti iyo data yega inotumirwa neMutongi zvakananga kune mumwe maneja, kana zvingaitwe nehunyanzvi. Mutemo unotaurwa muchikamu chino haungakanganise kukanganisa uye kodzero dzevamwe.
6. Kurudyi kuchiramba (Art. 21 GDPR)Kana dunhu rako rakagadziriswa kuitira zvakananga kushambadzira, iyo data yedhata ine mvumo yekupokana chero nguva kugadziriswa kwedatha yake yemunhu nekuda kwekushambadzira kwakadai, kusanganisira kudhinda, kusvika padanho rekuti kugadzirisa kune hukama nekutengesa kwakadaro. .
Kuitwa kwekodzero dziri pamusoro apa dzevanoshandisa webhusaiti zvinogona kuitika zvichitarisana nekubhadhara mumatare uko mutemo unoshanda uchiwanira izvozvo.
Muchiitiko chekutyorwa kwekodzero dziri pamusoro apa kana mushandisi webhusaiti achiona kuti data rake rairo ririkugadziriswa neMutongi zvinopesana nemutemo unoshanda, mushandisi webhusaiti ane kodzero yekuisa chinyunyuto neboka revatariri.
Zvinoenderana nemaitiro akagamuchirwa emawebhusaiti mazhinji, webhusaiti webhusaiti inochengetera mibvunzo inotsanangurwa kune seji yemushandisi webhusaiti (ruzivo nezve mamwe maitiro evashandisi vewewewekisheni ndeyekutsiva mugwaro resava). Izvo zviwanikwa zvakavhurwa zvinozivikanwa ne URL kero. Rondedzero chaiyo yeruzivo yakachengetwa muwebhu server faira faira ndeinotevera:
yeruzhinji IP kero yemakomputa kubva iyo kubvunza kwakabva,
zita rechiteshi chevatengi - kuzivikanwa kunoitwa neye protocol, kana zvichikwanisika,
webhusaiti zita rezita rakapihwa mumvumo (yekunaya) maitiro,
http mhinduro kodhi,
nhamba yemabheti akatumirwa ne server,
URL kero ye peji rakamboshanyirwa newebsite webhusaiti (referrer link) - kana webhusaiti yakawanikwa kuburikidza nechisungo,
ruzivo nezve webhusaiti yewebhu webhusaiti,
ruzivo rwezvikanganiso zvakaitika panguva yekuurawa kweiyo transaction ye http.
Iyi dhata iri pamusoro haina kubatana nevanhu vakatarisisa mapeji anowanikwa pane webhusaiti. Kuti uve nechokwadi chepamusoro-soro webhusaiti, webhusaiti webhusaiti iyi pano neapo inoongorora mafaira kuona kuti ndeipi mapeji mukati mewebhusaipi inonyanya kushanyirwa, ayo webhu mabhurawuza anoshandiswa, ingave iyo webhusaiti haina mhosho, nezvimwe.
Matanda akaunganidzwa neanoshanda anochengeterwa inguva isingaiti seyokubatsira zvinhu zvinoshandiswa mukutungamira kwakanaka kwewebsite. Ruzivo rwurimo marwuri haruzarurwe kune chero masangano asiri iye anoshanda kana masangano ane hukama nemushandi iye pachako, nekanzuru kana muchibvumirano. Zvichienderana neruzivo rwuri mumafaira aya, manhamba anogona kuve akagadzirwa kubatsira mukutungamira webhusaiti. Pfupiso dzine huwandu hwakadai harina zvinhu zvinozivisa vashanyi vesaiti.